श्रीमानको मृ’त्युपछि श्रीमतीलाई भे’ट्न रातभरी केटाहरुको लाइन (हेर्नुहोस भिडियो ) – Life Nepali
श्रीमानको मृ’त्युपछि श्रीमतीलाई भे’ट्न रातभरी केटाहरुको लाइन (हेर्नुहोस भिडियो )
1 month ago kamal
श्रमानको मृ’त्युपछि श्रीमतीलाई भे’ट्न रा’तभरी केटाहरुको लाइन (हेर्नुहोस भिडियो) बुटवल ११ मझुवा स्थित यि महिला आफैमा दु:खि छन् । श्रीमान साथमा छैनन् । साना छोराछोरीसंग बसेकी ति महिलालाई संरक्षण गर्ने कोही छैनन् । पानी चुहिने झुपडीका बसेकी यि महिलालाई पुरुषले यति सताएकी कोही सहयोगका लागि भन्दै जाँदा पनि उनी डराइन् । भिडियो बनाउन गएका युट्युवर जाँदा पनि शुसिला विक ड’राइन् । श्रीमान वितेर एक्लिएकी महिला देखेर उनको झुपडीमा टोलका पुरुषको भिड लाग्छ । साँझ पर्न पाएको हुँदैन पुरुषको लाइन उनको झुपडीमा लाग्ने गरेको छिमेकी महिलाले बताएका छन् । यति धेरै दिन परेको वर्षा उनको कोठाभित्र सिधै पानी पर्छ । एउटा छोरा पनि केही वर्ष देखि स’म्पर्कमा छैनन् । काखमा अर्को सानो छोरा छ । घरमा खानेकुरा नभएपछि जेठो छोरा पनि घर छोडेर हिडेका हुन् । जिवनमा निकै दु’ख भो’गेकी यि महिला अहिले मानसिक रुपमा पनि विरामी छन् । वि’रामी रहेका उनका श्रीमान पनि दुई वर्ष अघि नि’धन भएको हो । ३ सन्तानको आमालाई अहिले आफ्नो जिवन चलाउन पनि क’ठिन छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
छोरा हराएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । उनी फर्केर आएका छैनन् । अहिले आश्रय लिएर बसेको झुपडी पनि उनको होइन । पानी पर्दा उनको विस्तरा सिधै भिज्छ । खान भनेर कसैले सहयोग दिएको चामल पनि पकाएर खान मिल्ने पनि छैन । सबै भिजेको छ । झुपडीमा खाने अरु कुरा केही पनि छैन । काखमा भएको बच्चा पनि भोकै छन् । बोल्दा पनि उनको आवाज पनि आउँदैन । केही कुरा सोध्दा पनि उनी डराउँछिन् ।
छिमेकी महिलाले साँझ पर्न नपाउँदै उनको झुपडीमा केटाहरुको लाइन लाग्ने गरेको बताएकी छन् । आफुहरुले देख्दा उनीहरुलाई भगाउने गरेको पनि बताइन् । अर्की महिला भन्छिन्, हामीलाई देख्न पनि लाज भइसक्यो । सबैको मन राम्रो हुँदैन । यि बहिनीलाई जोगाउन पनि क’ठिन छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous आफ्नै बाबुले बोकाए १७ बर्षिया छोरीलाई ग’र्भ, ९ महिनासम्म ग’र्भ लुकाएर छोरीले ज’न्माइन छोरा !
Next आफ्नै बाबुले बोकाए १७ बर्षिया छोरीलाई ग’र्भ, ९ महिनासम्म ग’र्भ लुकाएर छोरीले ज’न्माइन छोरा !
यी क’स्ति नि’र्द’यी आमा ज’स्ले गरिन आ’फ्नै ३ स’न्तानको नि’र्म,म ह,त्या”
दशैको लागी ठुलो बोका नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यति सस्तोमा किन्न इच्छुकले सिधै फोन गर्नुहोस् !
2 weeks ago kamal
बिहे गर्छु भ’न्दै सात म’हिनाको ग’र्भ बो’काएर के’टो फ’रार- प्रे’मिका रू’दै मि’डियामा (भिडियो)
22 hours ago kamal
4 days ago kamal